MASAR oo si taxaddar leh u wajaheysa Soomaaliya kadib doorashadii Xasan Sheekh - Caasimada Online
Home Warar MASAR oo si taxaddar leh u wajaheysa Soomaaliya kadib doorashadii Xasan Sheekh
Qaahira (Caasimada Online) – Dib u doorashadii bishii May ee madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud mar labaad loo doortay madaxweynaha Soomaaliya waxaa dhashay su’aalo badan oo ku saabsan saameynta ay Masar ku yeelan karto danaha geeska Afrika.
Waxa uu intaasi ku daray “ma filayo in Madaxweynaha cusub ee Soomaaliya uu ku daba jiro isbahaysiga Itoobiya iyo Ereteriya ee uu abuuray Abiy Axmed, gaar ahaan marka la eego in Xasan Sheekh uu leeyahay aragti sheegeysa in Itoobiya ay duulaan ku tahay Masar”.
Cabdikariin oo sharaxaya iskaashiga dhex mari karo Soomaaliya iyo Masar ayaa yiri “Soomaaliya waxa ay sugeysaa hindise Masaarida ah oo lagu kordhinayo iskaashiga dhinacyada siyaasadda iyo dhaqaalaha, ma ahan oo kaliya dhanka amniga. Wadashaqeyntu waa inaysan ku koobnaan heerka rasmiga ah oo keliya, waayo waa in la sameeyo hindiseyaal waaweyn lagu kordhinayo isu soo dhowaanshaha Soomaaliya.”
Isla markii uu Xasan Sheekh noqday madaxweynaha Soomaaliya waxa uu la kulmay safiirada Qatar, Imaaraadka iyo Turkiga, waxaana go’aankiisii ugu horeeyay uu ahaa inuu soo celiyo 9.6 milyan oo dollar oo imaaraadku lahaa oo dowladii hore ay la wareegtay.
Doorashada madaxweynaha Soomaaliya oo ah mid istiraatijiyadeed oo muhiim ah ayaa Masar siisay xoogaa fursad ah, laakiin Qaahira ayaa wali si taxadar leh u muujineysa muhiimadda ay leedahay ilaalinta nabadda iyo xasilloonida Soomaaliya.